Maxaa ka cusub SABAHI
Iyada oo ku amaantay in weerarkii Charlie Hebdo in uu ahaa mid 'geesinimo ah' ayay al-Shabaab ay isku dayaysaa in diiradda ay warbaahinta caalmku ku hayso arirnka uga faa'idaysato in ay u muuqato in ay wali jirto, laakiinse bogaadinteedaasi waa mid dawga seegsan, falanqeeyayaasha ayaa sidaas leh.
Madixii hore ee amniyaatka al-Shabaab oo ka noqday aydiyoolajiyadda al-Shabaab kana dhigan dharbaxo ku dhacday kooxda argagixisada ah
Soo goosashada Sakariye Ismaaciil Xirsi Axmed uu ka soo goostay al-Shabaab waxay si xun u arbushi doontaa howlgallada kooxda waxayna dagaalyahanno kale ku dhiirri-galin doontaa in ay tallaabadaa oo kale qaadaan, sida ay sheegayaan falanqeeyayaashu.
Boqolaal macallimiin ah oo shaqo loogu qoray gobollada Gaarisa, Mandhera iyo Wajeer ayaa sheegaya inaysan soo noqoneeyn illaa ay ku qancaan inay xukuumaddu qaadday tallaabooyin ku filan sugidda amnigooda.
Xeerarka cusub oo la filayo in ay dhaqan-gal noqdaan bisha dambe ayaa looga golleeyahay in lagu xakameeyo wadaaddada khaa'imiinta ah isla markaana lagu xoojiyo daalacnaanta iyo la xisaabtanka ururrada diineed.
Al-Shabaab waa laga saaray meelo badan oo Soomaaliya ah laakiin dhaxalkii colaadaha ayaa wali dhibaato badan ku sii haya maanka dadkii la kulmay xukunka adag ee kooxda.
Dawladda Soomaaliya waa in ay xaqiijiso in dagaalyahaniinta al-Shabaab ee qalloociyaya shareecada si ay danbiyo u galaan la hor keeno cadaaladda, dadkii ay dhibaatada u gaysteena xaqooda la siiyo, ayay leeyihin dhibanayaashu.
Kenyaanka oo u riyaaqay gelitaankii hay'ada la-dagaalanka musuqmaasuqu ee xarunta booliiksa ee Nakuru
Xaalada haweenay si sharci daro ah ay booliiksu u ahyeen kadibna uu sii daayay Komishinka Anshaxa iyo La-dagaallanka Musuqmaasuqa ayaa loo arkay in ay tusaale u tahay sida uu shacabku saamayn ugu yeelan karo dadaallada musuqmaasuqa ka dhanka ah.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan ayaa xariga ka jaray qaybta cusub ee dhawaan la casriyeeyay ee madaarka Muqdisho iyo Isbitaal isaga loogu magac-daray, waxna uu ballan-qaaday in uu sii wadi doono taageerada uu siiyo Soomaaliya.
Ganacsato ku soo qulqulaya Suuqa Wakulima ee Nairobi
Suuqa Wakulima, oo shaqeeynayay laga soo bilaabo 1966-kii, waa suuqa ugu weyn ee lagu iibiyo qudaarta darayga ah ee Nairobi. Waxa loo dhisay in uu qaado 300 oo ganacsade, laakiin hadda waxa isticmaala in ka badan 7,000. Guddoomiyaha Gobolka Nairobi ayaa u sheegay Sabahi in ay socdaan qorshayaal lagu rarayo laguna ballaarinayo suuqa si loo dhiirri-galiyo in ay abuurmaan ganacsato dheeri ah.